Ukususa imingxunya ye-AR-NAB bonisa iiNdaba ngoSasazo lweBeat, Usasazo lwaseburhulumenteni lwe-NAB Show-NAB BONISA LIVE
ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » Ukususa imingxunya ye-AR
By UPhil Ventre, uMdlalo weVP kunye nosasazo, uNcam
Ngelixa into yokwenyani yokwenziwa kwezinto ezisasazwayo isekwinqanaba eliphakathi, ukusetyenziswa kwayo ekugqibeleni kusuka kwinqanaba le-gimmicky 'elitsha lokudlala'; Imizobo ye-AR iba yinxalenye yomxholo wenkqubo, kwaye abaphulaphuli abanobunkunkqele bafuna i-hyper-real, iigraphics ezinokukholeka ezintywiliselwe ngokupheleleyo kwimeko yenyani yehlabathi.
Icandelo losasazo lezemidlalo ikakhulu liye lamkela imizobo ye-AR ukuphucula iinkqubo. Kwizitudiyo zosasazo, umceli mngeni kukubonisa imizobo efana nedatha yezemidlalo kunye neenkcukacha-manani ngeendlela ezintsha nezibonakalayo zokuyila; ngetekhnoloji encinci yokulandela umkhanyo wekhamera njengeNcam Reality, ngoku zinokuvumela abadlali abangoo studio ukuba babonakale behambahamba kumdlali wegalufa, kwaye banokuthi kunye ne "teleport" iimbaleki zibe ziimiboniso zembasa ezivela kumawakawaka eekhilomitha-zonke hyper-real-grafics
Enye yezithintelo zokugqibela ukulandelela ikhamera kujongane nayo kwindawo yokusasaza bukhoma kukusebenza ngaphandle kwamacingo. Isisombululo sethu se-AR sasinekhamera kunye nebar sensor eyondla idatha yokusingqongileyo ukubuyela kwiserver yesoftware ngentambo etyhidiweyo; Ngelixa oku kufanelekile ngomsebenzi we studio kunye nezikhundla ezisisigxina kwi-OB, zithintelwe kusasazo olubanzi lokuphila.
Xa ezemidlalo ze-CBS zisondela kuthi ngombono wokubeka imizobo ebonakalayo kwisandi seSuper Bowl, umceli mngeni yayikukuhamba kwedatha nge-RF ukusuka kwi-Steadicam rig kwindawo yokubuyela kwilori yokuvelisa. Sidinga ukufumana indlela yokukhulula ukusebenza kwekhamera, sivumele ukuhamba kweekhamera ngokukhululekileyo kusebenze kubadlali.
Isisombululo yayikukunyusa ibar sensor kwi-Steadicam RF rig njengesiqhelo, kodwa endaweni yokufaka iirig kwiseva enkulu yeNcam, ikhompyuter encinci yabekwa endaweni. Nangona ikhompyutheni yahlala ithungwe kwi-Steadicam rig, yayihamba kakhulu kwaye ihamba ngokulula ngumncedisi onokuthi akwazi ukuhamba ecaleni komphathi weSteadicam kwaye asebenzise isoftware kwangoko. Isibonakaliso se-RF sinokuthunyelwa ngaphandle kwentambo kwilori yokuvelisa.
Kanye ne-RF Steadicam ebiqhutywa embindini webala ngaphambi komdlalo, iMidlalo ye-CBS ikhuphe iirigs ezimbini zeNcam AR ezibekwe emgceni: i-Steadicam emile yayimiswe phezulu Umdlalo weFanDay fan Plaza (istudiyo esingaphandle kwibala leMercedes Benz), ngelixa enye yeetekhweyitha zikaTechojib zazimi ebaleni. Yonke imifanekiso yenziwa liQela leKamva.
Yonke into isebenza ngokugqibeleleyo ngosuku kwaye usasazo lwaba yimpumelelo enkulu, ngeziphumo ezingaphaya kwesiganeko esinye e-Atlanta - nangona isiganeko esimanyumnyezi esijongwa zizigidi kwihlabathi liphela.
Ukusukela ngoko, besisebenza namaqela eR&D kubasasazi abaliqela nakwiinkampani zemveliso, besabelana ngezicwangciso zabo kunye neendlela zethu zokuphucula ubuchwephesha ukuze babavumele benze okungakumbi nge-AR. Ngokwenza ukuba ikhompyuter iseva ibe ncinci kwaye ibe lula, abathengi bekhamera ngoku bangazithwala, babanike inkululeko engakumbi yokuhamba. Ukongeza, inkqubo yokulandela ikhamera engaphantsi-kokuvumela ukuba abasasazi basebenzise i-AR phantse kuyo nayiphi na indawo, nokuba kungaphakathi okanye ngaphandle, njengoko ithatha amanqaku endalo kwimeko yayo endaweni yokuxhomekeka ekubekeni amanqaku.
Ngokuhambelana, ukubakho kwe5G kusekwe ukuba kudlale indima ephambili kwindlela eziswa ngayo ezemidlalo. Imidlalo ye-BT iphambili kolu buchwephetsha butsha, kwaye yenziwe ngempumelelo kwimveliso yangaphandle ebaluleke ngaphezulu kwe5G kwiinyanga nje ezidlulileyo. Amaqela emveliso aya kuba nakho ukuthimba imifanekiso ebukhoma ngokuncitshiswa kakhulu kwebala okanye naphi na ukusuka kumnyhadala wezemidlalo-ibhasi yeqela, itonela, izitendi, iziko eliphakathi elitafileni-elinika abalawuli itafile enkulu kunanini na ngaphambili ukubalisa amabali abo.
Yongeza imizobo ye-AR engafakwanga ixesha lokwenene kwimveliso, kwaye inkululeko yokudala ekhoyo ngoku kubasasazi iyothusa.
Ngelixa umdlalo ungoyena mqhubi uphambili kwezi teknoloji, baya kuthi bazuze nasiphi na isiganeko esiphilayo, ukusuka kugubulo lonyulo (khawufane neSwingometer ebekwe ngaphandle kwesitrato esise10!) Ukuya kusasazo olukhulu loluntu.
Ngokuvula amathuba okwenzeka okwenyani okungasasebenziyo ngomkhondo wekhamera ongafunyanwanga, siya kuba sibona abasasazi abaninzi besamkela amathuba oko kunokufezekiswa.
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli Iintetho kunye nemisrya Injini yeVidiyo	2019-08-06
Previous: Amandla ePixel anceda abathengi ukuba baguqulwe kwizisombululo zesoftware kunye neenkokeli ezongezekileyo zentengiso kunye neenkokeli zokuhanjiswa kweprojekthi
next: Iimveliso ze-TSL zivelisa uPhuculo lwamva kuPlatifomu yoHlolo loMsindo kwi-SAM-Q kwi-IBC 2019